I-Samsung Gear S2, ikopi yakutshanje esuka kwi-Samsung ukuya kwi-Apple | IPhone iindaba
I-Samsung Gear S2, ikopi yakutshanje esuka kwi-Samsung ukuya kwi-Apple
UMiguel Hernandez | | iPhone, Izaziso
Kubonakala ngathi ifotokopi Isamsung ayinasiphelo, bezilungile. Ihlazo lakutshanje ngendlela yokukopa linikwe igama leSamsung Gear S2 kunye nomsebenzisi wayo ngokukhumbuza isikhuselo seWatch OS yeApple Bukela. Ayothusi kuthi into yokuba inkampani yaseKorea ibandakanyeka kolu hlobo lokuziqhekeza, ngakumbi ngalo lonke ixesha iApple isungula imveliso ecace gca kunayo okanye nakoluphi na ukhuphiswano. Kubonakala ngathi ukulandelelana kwamatyala phakathi kweApple kunye ne-Samsung ngekhe kuphele.
Iwotshi entsha ye-Samsung yatyhilwa emva kokuboniswa kwe-Samsung Galaxy Note 5 kunye neGPS S6 Edge +, nangona kunjalo iwotshi ayizukuhanjiswa ngokusemthethweni Nge-3 kaSeptemba e-IFA eBerlin (mhlawumbi iintsuku ezintandathu ngaphambi kwengcaciso ephambili ye-Apple). Ngelishwa ziye zanqongophala kubuchule bokuyila mva nje kwiiofisi zeSamsung, ngakumbi emva komfanekiso wesekela likamongameli wentengiso, ngokufana kakhulu nefoto eqhelekileyo kaSteve Jobs.
Into kukuba, ukuba ibingeyiyo imilo yangaphandle, ukusukela iGear S2 ingqukuva, ayinakwenzeka okanye iphantse ingenzeki ukwahlula phakathi kwezi zixhobo zimbini ngokujongana nomsebenzisi. Ndikholelwe, oyena msebenzisi ungenamava ngekhe akwazi. Ukusuka kwinto encinci eyaziwayo malunga nale wotshi kukuba isisombululo siya kuba yi-360 × 360, ngokwembono yobume bayo obungqingqwa, buxhotyiswe ngescreen se-AMOLED kunye neprosesa ye 1,2 GHz Exynos engundoqo ezimbini isantya sewotshi. Okokugqibela iya kuba ne-768 Mb ye-RAM kunye nebhetri engenakususwa kwi-250 mAh.
Ngokubhekisele kwinkqubo yokusebenza, asinakuthetha kancinci emva kokubona lo mfanekiso ulandelayo. Ngapha koko, kuya kufuneka siwabone amaxabiso ewotshi entsha ye-Samsung. Masithembe ukuba bazothuka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » I-Samsung Gear S2, ikopi yakutshanje esuka kwi-Samsung ukuya kwi-Apple
Izimvo ezi-37, shiya ezakho
Ngokwesiqhelo andingeni kwiingxoxo nge-Apple vs Samsung, kodwa oku ukuba sisikhubekiso esikhulu ...
UMiguel, iApple ayinalo ilungelo lobunikazi kwiimpawu ezijikelezileyo zeewotsOS ?? Ukuba bayayikhulula ngokusesikweni, iApple kufuneka igxeke iSamsoni ngokukopa ezo icon… ingaba ndiphosakele?
Akukho lula ukungena kolu hlobo lwempikiswano esemthethweni, nangaphezulu kwayo nantoni na kuba iApple okwangoku ayibuboni ubukhulu bayo kwihlabathi leewatchwalk ezisemngciphekweni.
Umgxeki wakho omkhulu undidikile. Kuba awuzukuthumela umyalelo wakho mamaracho kwiphepha le-android.
Ewe yayingenguye, funda impendulo yam ngasentla fanboys kakuhle ukubona ukuba ndiza kufunda nto na, iApple yayingengowokuqala ukususa umbala wegolide, okanye owokuqala ukusebenzisa iminwe, yonke into yayisele ikhona, ndiyamkele nje wenza eyakhe, okanye wayikopa njengoko usitsho, wayenza ukuba ibe nefashoni kuba iyeyona nto ipholileyo, kodwa khange ayenze into entsha ixesha elide.
Njengoko benditshilo, i-Samsung ine-14 nanometer exynos processor yayo, ekuphela kwayo emarikeni, kwaye iApple sele isebenza kuyo, ngenye imini ndafunda ukuba yayiyinto entsha! Hahaha kwaye bayakholelwa !!! Leyo yingxaki, ukholo olungaboniyo lwabalandeli bayo abathenga unyaka nonyaka ifowuni enye enesitayile esahlukileyo, ii-bits ezingama-64 ezimangalisayo ezibonakala ngathi zenziwe ngu-Apple azifanelekanga nam, ayizizo ezabahlobo bam, u-Apple akayenzanga loo nto, inyathelo lama-32 angama-64-bit yayiyindlela yendalo eyayisiza, akukho mntu wayenzayo kuba yayingeloxesha, enyanisweni iApple ikhawulezile kuba bekungekho naziphi na iiapps okanye nantoni na elungiselelwe ukuncama ukusebenza, enyanisweni amasuntswana angama-64 akuvumela ukuba uhambe ngaphaya kwe-4 gb yenkunzi yegusha, kwaye iapile iseyindlela ekude ekusebenziseni loo nto, iapile ayisiyiyo le nto ibiyiyo ixesha elide, ndiyayikhumbula intengiso ye-aifon 4s tv, bapapashe iifoto zepanoramic njengezinto ezintsha ezintsha !!! Ezinye iapile !! Ndaye ndahleka kuba i-galaxy s2 eyayinexesha elininzi, yenza iifoto zepanoramic kwakude kudala ngaphambi kweApple, hahaha ezantsi ezi fanboys zilusizi, itekhnoloji yeyomntu wonke kunye nawo wonke umntu, kufanele ukuba ivuleke kwaye ilandele imigangatho ethile, kwaye iapile iyangqubana nefilosofi , yonke into ivaliwe, kwiqela elithile lodidi lwentlalo, bakusa apho bathi, kwaye bayayichasa imigangatho yehlabathi, iapile iyaphikisana nemigaqo yam, yinkunkuma, kwaye umkhosi wayo wabalandeli ikakhulu ziigusha ezinyanisekileyo kuhlobo ngaphandle ngokwazi oko kunikelwa ngabanye, bangamabanjwa.
Ngaphambi kwe-nanometer Exynos eyi-14, iSamsung ibinokutyala imali kwiitshipsi ezingama-64Bits ebezishiywe lixesha, bekungekho namnye owenzeyo ngaphambili kuba ezi nkampani azinamdla wokuqhubela phambili ngokukhawuleza ukuze ziqhubeke nokuthengisa iifowuni zazo ezisezantsi, kodwa xa iApple inyanzela ukuba zilandele ukuvuka. Ngokubhekisele kwi-App, ngokufika kwe-iOS 9 iApple sele ilumkisile ukuba zonke izicelo mazifakwe kwi-x64, kwaye ukuba ucinga ukuba uncedo lwabo kuphela kukusebenzisa ngaphezulu kwe-4Gb ye-RAM, kuya kufuneka ufunde isifundo kancinci Kaninzi.
Ngokuphathelele iApple kunye nenkqubo yayo evaliweyo, iya ngokuchaseneyo nemigangatho yehlabathi, kuba ukuba ujonga, ezi zihlwempuzekile, zenza iifowuni ezinesoftware yokwenziwa kwesoftware emhlabeni. Konke kuxhomekeke kwindlela ojonga ngayo. Ngokuphathelene nalo lonke uluvo lwakho, ndingavuya xa ungakhange uthuke abanye abantu abanelungelo elifanayo lokubhala njengawe.
Umbuliso kunye nombulelo wokufunda.
UJose Luis, uyazi ukuba kutheni ekukruqulile? Kungenxa yokuba awuqondanga kwanto, ufuna ukuba i-aifon yakho ibe ntle kwaye awazi enye into hahahaha ndibhala apha kuba ezi ndaba zibuhlungu kwaye kwiindawo ze-android zikrelekrele ngakumbi kunawe, nawe kufuneka ubone Ukukhathazeka kwe-fanboys ye-Samsung, andikaze ndifunde naliphi na inqaku le-Android eligxeka i-apile, kwaye kwi-proapple webs yonke into isamsung samsung enye, ndicinga ukuba ukhathazekile
UJose luis das pena, ucinga ukugxeka uthi hahahaha, kuwe ukugxeka oko kukuthi, yithi "iapile ipholile, ikopi yesamsung" hahaha kwaye xa ufunda ukugxekwa into yobuchwephesha ucinga ukuba yiTshayina, ale ugoduke umzala wakho ulapho kanye umhlekisi walapha, uyahlekisa
Ubusuku obuhle kwakhona uBenedict.
Ngokubhekisele kwingxelo yakho yokuqala malunga ne "S" yeemodeli, i-iPhone 3G / S yaphehlelelwa ngeyeSilimela ngo-2010, kwinyanga enye yokwazisa njengeyokuqala i-Samsung Galaxy S.
Ngokubhekisele kwiGear kunye neApple Watch, nakuphi na ukuthelekisa phakathi kwezi zinto zimbini kuyahlekisa. Kuyo nayiphi na imeko, into enokukhutshelwa iya kuba yinyani yokwenza iwotshi efanelekileyo, ukuba sizibeka ngolu hlobo sinokutyhola iSamsung ngokukopisha ngokwenza iikhompyuter, kuba iApple yazenza kwakude kudala ... Nceda unike iingxoxo ezisemgangathweni.
-Ukuqokelelwa kwendelelo kunye nokuthukwa kwizimvo zakho kuvelisa ukungabikho kweempikiswano.
-Kuyahlekisa ukuba uthi iApple Pay ingaphantsi kuneSamsung Pay. Andazi ukuba zingaphi iibhanki kunye neevenkile onokuzihlawula nge-Samsung Pay, kodwa kunjalo e-United States i-Apple Pay sisalathiso seentlawulo zeselfowuni, kuya kufuneka ungene ngaphakathi kuGoogle ...
Okokugqibela, malunga nokunxibelelana kweYouTube kuWhatsApp, ngumba wabaphuhlisi beYouTube, abangayisebenzisiyo umsebenzi "weSabelo" esongezwe ukusukela nge-iOS 7 kwaye evumela olu hlobo lwedatha ukuba kwabelwane ngalo phakathi kwazo zonke izicelo, kunye nomsebenzi wabo umphuhlisi wesicelo ekufuneka ewenzile, kuyo nayiphi na imeko ngabo baphethe i-Android, ikwangabo baphuhlisa i-YouTube App, ekufuneka beyilungisile. Kuyacaca ukuba kukho into ekumfamekisayo, kwaye uthetha ngezinto ongaziqondiyo okanye ongazaziyo. Ndiyakucela ukuba uthelekise ulwazi ngaphambi kokuba wabelane ngalo nceda ugcine iphepha elinobubele kwaye lihloniphekile.
Ndiyayithanda uyilo, andizithandi kakhulu iimveliso zeSamsung kodwa le wotshi inomdla, ukuba inokuhambelana ne-iPhone ndingayijonga kwakhona ukubona ukuba kufanelekile ukuthenga.
Ukuhlawulwa kweApple akukho ngaphantsi kwe-Samsung Pay, kodwa kuya kuba njalo, kuba i-Samsung ayifikanga kwaphela kodwa iphumelele ngamandla, ngaphandle kokuphumeza intlawulo nge-NFC ikwabandakanya nenkonzo ye-MST, obu buchwephesha busivumela ukuba sihlawule ngeedatha ezenza awunayo i-NFC, kodwa isamkeli esiqhelekileyo semagnethi. Oko kuyinika inyathelo elingaphezulu kokuhlawulwa yiApple, kuba ayizukufumaneka kuphela kwiinkampani ezinkulu kodwa nakwabancinci abangenayo i-NFC, okuthetha ukuba indawo engaphezulu iphumelele ngeSamsung.
UMSEBENZI OQHELEKILEYO sitsho
Ayindichaphazeli nakancinci, kodwa uyabona ukuba uyayenza, ngakumbi loo msebenzisi uBenedict, Thixo yintoni indoda enganyamezelekiyo, ngethamsanqa uyinyani, iApple kunye ne-Android abandiniki okufanayo ukuba ikhona okanye ayikho. Kodwa ndisebenzisa i-iPhone kuba inestayile kwaye ikhuselekile. Kwaye andisayinxibi iwotshi kwakhona.
Phendula UMSEBENZI OQHELEKILEYO
UDavid david david sitsho
Phendula kuDavid David David
Eli nqaku lihamba ngaphandle kwe-bile
Ngoku kuyacaca ukuba yonke into iyikopi yeApple, le bhlog ilisikizi elityheli, ukusuka apho uyibona khona le wotshi isebenza ngakumbi. Abalandeli abanovelwano.
Ayivakali ngathi yiSandy yakudala, kodwa ndiyakhumbula ukufika kwam kweli phepha ukubona iApple News, nangona kunjalo okwethutyana ngoku, ndibona iindaba ezimnandi nezomona. Ngokweendaba, ukuba nabani na uvula isixhobo esineesetyhula, ngokuzenzekelayo ikopi yeApple Watch? Kuvakala ngathi bububhanxa xa usithi iApple iphefumlelwe sisetyhula Google Chrome icon yenkqubo yayo. Nceda uzimisele ngakumbi kwaye ubuchule kwiindaba, ngayo yonke imbeko efanelekileyo kubahleli bewebhu kodwa kubonakala ngathi zibhaliwe ngumntu okhuselweyo okanye onomsindo oneminyaka eli-12 ubudala, zithathe njengengcebiso kwizithuba ezizayo. Ndiyabulisa!
UPaolo CF sitsho
iapile yayingenguye owokuqala kodwa xa uSamung esiva ukuba iapile lisebenza kwi-smartwach waya phambili ekhupha into engekhoyo.
Phendula Paolo CF
Zama ukuba ungenzi izihloko zivuyise ii-plsssss
Luis v sitsho
Ulunge ngaphezu kwengcwele, umzekelo indlela abahleli abazichaza ngayo (kunye neethegi zabo eziqhelekileyo) indenza ndinomsindo, kuba andikhethi buso.
Phendula u-luis v
Kwaye ayizukuba bubudenge ukusebenzisa ii-icon zesikwere ngewotshi ejikelezayo? Ngokukrakra, ngaba umntu uya kuyicinga? Yintoni ekufuneka ifundwe…
Uhlaziyo luka-Apple iPod nano software
USiri usindisa umntwana ofikisayo ovaleleke phantsi kwelori